အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု - 10 ကီလိုဂရမ် / 10 ရက်,
၏ဖော်ပြချက် အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု - 10 ကီလိုဂရမ် / 10 ရက်,
🏆အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု - တစ်ဦးကိုနေအိမ်လေ့ကျင့်ခန်းသင်တန်းပေး & ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ, သင်မထိုက်မတန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာစောင့်ရှောက်ဖို့အတှကျလှယျကူ-to-အသုံးပြုမှုကိုအခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်အစာရှောင်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ချွတ်အစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်များ - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု3Levels ပေးပါသည်။ ပဲမိနစ်အနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလ၌, သင်အဆီရှို့နိုင်ပါတယ်နှင့်အားကစားရုံကိုသွားစရာမလိုဘဲအိမ်မှာကြံ့ခိုင်ရေးစောင့်ရှောက်လော့။ ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်နည်းပြလိုအပ်ဘယ်သူမျှမက, ရှိသမျှလေ့ကျင့်ခန်းပဲသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
👉Whatသင်နှင့်အတူပျော်မွေ့နိုင် - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု 10kg / 10days, သင်တန်းပေး & ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ?
✓ချောင်နူန်းကျော်ကျော် 60 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။
✓ 10 မိနစ်နေအိမ်လေ့ကျင့်ခန်း။
✓သင့်မူလလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာစီမံနှင့်အတူကျန်းမာသန်စွမ်း, leaner, ပိုမိုအားကောင်းရယူပါ။
✓, ကိုယ်အလေးချိန်သင့်ရဲ့အဆီမီးရှို့ leaner နှင့်အတူရ - အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု 10kg / 10days, သင်တန်းပေး & ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြ။
✓ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပေမယ့်အစွမ်းထက်လေ့ကျင့်ရေး app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သင်ဖြစ်လာ။
★ BMI, စံပြအလေးချိန်ဂဏန်းတွက်စက်
★သိကောင်းစရာများနဲ့ Fit နှင့်ကျန်းမာရေးဆက်နေရန်
■အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းခေတ္တရပ်တန့်ပြီး, နက်ဖြန်သို့မဟုတ်ယခင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ skip နိုင်ခြင်း,
■သင်သည်ကြားကာလလေ့ကျင့်ခန်း Sprint ကမ်းလှမ်း;
စိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်များ၏👉Thousands app ကို5ကြယ်ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်အောင်မြင်ကောင်းသော results.This အစာရှောင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု app ကိုသငျသညျအစဉျအမွဲအားကစားရုံ hit ရန်မလိုဘဲတစ်ခုတည်းကလစ်အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အစားအစာအထူးကုများ၏ကျွမ်းကျင်မှုရှိပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးနောက် GooglePlay မှာမိမိတို့စိတ်အားထက်သန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျန်ကြွင်းစေပြီ။
အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Apps ကပ
ဆုံးရှုံးအလေးချိန် app ကိုရှာဖွေနေပါသလား အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်လိုပါသလား? အဘယ်သူမျှမကျေနပ်ကိုယ်အလေးချိန် app များကို? အဘယ်သူမျှမပူပန်, ဒီမှာသင်အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံးရှုံးအလေးချိန် App ဖြစ်ပါတယ်။ အစာရှောင်ခြင်းအလေးခြိနျဆုံးရှုံးဖို့အခုထွက်ကြိုးစားပါ, ဒီဆုံးရှုံးအလေးချိန် app ကိုသာလေ့ကျင့်ခန်းမှာအကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းတစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်ကိုယ်အလေးချိန် apps များဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ရေး App ကို
အကွိမျမြားစှာအပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်ချောင်အဆီအကူအညီပေးဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ အားလုံးကိုယ်အလေးချိန်အကြံပေးချက်များ, အစားအစာနှင့်ကျွမ်းကျင်သူလေ့ကျင့်ခန်းကိုလိုက်နာပါ, ပိန်ခန္ဓာကိုယ်သင့်ရဲ့လက်လှမ်းမမီအတွင်းပါ!
10 ရက်အတွက်၌သင်တို့၏အသက်တာကို JOIN နှင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်!
ေတးေရး လူကုိခ်စ္ ေတးဆုိ လူကုိခ်စ္ !!! ဆရာႀကီးေတာ့ ဆရာႀကီးပဲ!!!
ျမန္မာသံစဥ္ ခ်စ္တဲ့ မုိးခ်စ္သူေလး
Diet｜3일동안 오트밀 다이어트🤍｜단기간 다이어트 (feat. 녹차 오트밀 요거트, 오트밀 게살죽, 쫀득한 우유 오트밀)
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အရသာရှိသော ခေါက်ဆွဲထုပ်များကို အထူးပြုထားသော စားသောက်ဆိုင်
ယန်း 100,000 ကျော်။ အကောင်းဆုံးငါးကို ခွဲထုတ်ပြီး Longtooth grouper ကိုစားလိုက်တဲ့အခါ အံ့သြသွားတယ်။
JADAM သင်ကြားရေးအပိုင်း ၁၄။ ဓာတုပိုးသတ်ဆေးမှကင်းလွတ်ကြောင်းကြေညာပါ။ JWA ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်